Madaxwayne Brack Obama Maanta Kulan Kula kala qaatay Madaxwayne Mulatu tashome iyo raysalwaare hailemariam qasriga madaxtooyada. - Cakaara News
Madaxwayne Brack Obama Maanta Kulan Kula kala qaatay Madaxwayne Mulatu tashome iyo raysalwaare hailemariam qasriga madaxtooyada.
Addis-Ababa(CN) Isniin July-27-2Madaxwaynaha Dalka maraykanka Brack Obama ayaa Booqasho ku yimid dalka itoobiya oo ah dalka labaad ee ugu dad badan Afrika ka dib markii uu soo dhamaystay booqashadii dalka Kenya. Brack obama ayaa ku joogi doona booqasho qaadanaysa labo maalmood isagoo maanta uu kulan kula qaatay madaxtooyada madaxwaynaha DFI Mudane Mulatu tashome iyo raysalwasaare hailemariam Desalegn oo ay kaga wada hadleen arimo la xididha sii xoojinta xidhihiidhka labada dal,la dagaalanka Argagaxisada Al-qaaida iyo alqushaash sidoo kalana xal u helida khilaafaadka Koonfurta Sudan. Obama ayaa sheegay in doorka itoobiya ay ka qaadatay somaliya ay tahay mida yaraysay khataraha Aragagaxisada Al-shabaab ee Gobolka islamarkaana Ethiopia iyo US ku heshiiyeen in ay iska kaashdaan dagaalka lagula jiro argagaxisada caalamka iyo gobolkaba.
Brack Obama ayaa la filayaa in uu Shirka midowga afrika uu kala hadli doono sidii afrika ay xil isaga saari lahayd xalinta khilaafaadka South Sudan la isugu soo dhawayn lahaana labada dhinac taasoo noqon doonta taariikhda madaxwaynihii 1aad ee maraykanka ee hadal ka jeediya Shirka Midawga Afrika.
Madaxwayne Obama ayaa sidoo kale Kulan la qaadan qaadan doona raysalwasaaraha DFI Mudane hailemariam Desalegn islamarkaana indhihiisa ku daawan doona horumarka iyo dhismayaasha xawliga ah ee magaalada addis ababa laga hirgaliyay iyo kobaca dhaqaale ee ay ku talaabsatay DFI iyadoona ay Addisababa tahay magaalada 1aad ee Afrika lehna Tareenka casriga ah ee dhulka hoostiisa mara.